China slurry pump pombi liner fekitari uye bhizimisi | YAAO
Iyo yerabha yakanyorova zvikamu zvakakurisa kupfeka kuramba uye ngura kuramba, inowanzo shandiswa kune acid inoshanda mamiriro. Zvakadai tailing mune yekuchera indasitiri, slurry ine zvidiki zvidiki uye isina yakaoma micheto. Chikamu chese chinofambisa chinosanganisira Cover Plate Liner, Huro bushing, Frame ndiro liner, Furemu Plate Liner Isa.
Irabha zvinhu zvataishandisa zvine masimba ekumiririra kune zvimwe zvese zvinhu mune yakanaka tunhu slurry mafomu. Iyo antioxidants uye anti degradents anoshandiswa mune edu zvinhu zvakagadziridzwa kugadzirisa hupenyu hwekuchengetedza uye kudzikisira kudzikisira panguva yekushandisa. Iko kukwirira kwekupokana kwemvura kunopihwa nemubatanidzwa weiyo yakasimba kugadzikana, yakasimba tensile simba uye yakadzika kumahombekombe kuomarara.
Maumbirwo e slurry pombi
YAAO® Rubber Zvishandiso Rudzi Uye Dhata Tsananguro
YAAO Code Zita rezvinhu Type Tsananguro
Natural Rubber YR26 yakasviba, yakapfava yakasikwa rabha. Iyo ine yepamusoro yekukwira kwevhu kushora kune zvimwe zvese zvigadzirwa mune yakanaka tunhu slurry kunyorera. Iyo antioxidants uye antidegradents anoshandiswa muRU26 akagadziridzwa kusimudzira hupenyu hwekuchengetedza uye kudzikisira kudzikisira panguva yekushandiswa. Iko kukwirira kwekupokana kweRU26 kunopihwa nemubatanidzwa weiyo yakasimba kugadzikana, yakasimba tensile simba uye yakaderera Shore kuomarara.
Natural Rubber YR33 ndeye yekutanga giredhi dema yakasikwa yerabha yekudzika kuomarara uye inoshandiswa kune dutu uye pombi liners uye impeller uko kwayo kwepamusoro zvivakwa zvinhu zvinopa yakawedzera akacheka kuramba kune akaomarara, akapinza slurries.
Natural Rubber YR55 yakasviba, Anti-inoparadza yakasikwa rabha. Iyo ine yepamusoro yekukwira kwevhu kushora kune zvimwe zvese zvigadzirwa mune yakanaka tunhu slurry kunyorera.
YS01 EPDM Rubber Chakaita zvokugadzirwa Elastomer
YS12 Nitrile Rubber Chakaita zvokugadzirwa Elastomer Elastomer YS12 inogadzirwa nerabha iyo inowanzo shandiswa mukushandisa kunosanganisira mafuta, mafuta uye namo. S12 ine mwero wekudzivirira kusagadzikana.
Chakaita zvokugadzirwa Elastomer YS31 is oxidation uye kupisa kupisa elastomer. Iyo ine chiyero chakanaka chemakemikari anodzivisa kune ese ari maviri maidhi uye mahydrocarbon.
YS42 Polychloroprene (Neoprene) Chakaita zvokugadzirwa Elastomer Polychloroprene (Neoprene) isimba rakakwira synthetic elastomer ine masimba ane simba zvishoma zvishoma pane yakasikwa rabha. Izvo zvishoma zvinoitwa netembiricha pane yakasikwa rabha, uye ine yakanakisa mamiriro ekunze uye ozone kuramba. Inoratidza zvakare kushamisa kwemafuta.
YAAO® Slurry Pump Rubber Zvikamu Zvishandiso
YAAO Slurry Pump Rubber Zvikamu zvinoshandiswa zvakanyanya kune AHR / LR / Horizontal slurry pombi, SPR Vertical rubber lined slurry pumps, Centrifugal horizontal slurry pumps, Warman rubber lined slurry pumps, Chemical slurry pumps, Silica sand slurry pumps, Minerals processing slurry pumps, De -Kudiridza Screen Pump, Ore pombi pombi, Tailings Pump, Pipe-jacking slurry pombi, Bhora chigayo kuburitsa Pump, Tunneling slurry pombi, Kusanganisa tangi slurry Pump, Wet crusher slurry pombi, SAG chigayo kubuda pombi, Bhora chigayo kuburitsa mapampu, Rod Rod mill kubuda slurry pombi, Ni acid slurry pombi, Mahombekombe ejecha mapampu, Mahara tailings mapampu, Phosphate matrix slurry pumps, Scrubber slurry Pump, Minerals concentrate pumps, Heavy media slurry pumps, Dredging Sand slurry pumps, Bottom ash slurry pumps, Fly ash ash pump, Lime kukuya mapampu, Screen yekupa Pump, Mafuta sandi mapombi, Mineral Sands mapombi, Akanaka muswe mapampu, Miswe yekuwedzera Pump, Thickner Tailings Pump, Maitiro ekudzokorora Pump, Pipeline yekuchinjisa mapombi, Phosphoric acid slur ry pombi, Coal slurry pombi, Flotation pombi.
Disiki: YAAO® chiratidzo chakanyoreswa, uye haimiriri kana kuti haina kana hukama neWarman®, uye mamwe mazita ezita, ese aya mazita ezita anoremekedzwa sevaridzi. Chero mazita, mamodheru, manhamba, mamaki kana chero tsananguro anoshandiswa kureva chinangwa chete, uye hazvireve kuti chero chikamu kana pombi yakanyorwa ndicho chigadzirwa cheWarman®, YAAO® zvikamu zvekupokana zvinongochinjika. Gwaro iri chivakwa cheYAAO, uye harigone kuburitswa kana kuziviswa kune wechitatu bato nemvumo yakanyorwa.
Pashure: AH Slurry Pump Rubber ZVIMWE BUSH
Zvadaro: Slurry Pump Expeller Mhete